Posted on July 12, 2011 by giriyaad
sheekh shariif sheekh axmed iyo waraysigiisii halkan kala soco
Madaxweynuhu waxa uu wareysigan kaga hadlay arrimaha ammaanka, khilaafka dawladda, magacaabista Ra’iisal Wasaaraha cusub iyo qodobo kale.
Wareysiga oo dhamesytiran qeybta hoose ka dhageyso.
Daawo Xafladda Koonfurta Sudan
Wasiirka Dib Udajinta Iyo Wafti Uu Watay Oo Si Balaadhan Loogu Soo Dhaweeyay Degmada Quljeed Oo Uu utagay Arimo La Xidhiidha Caleema Saarka Suldaanka Beesha Jibriilyoonis
July 12, 2011 — giriyaadnews
aniga iyo nin aan asxaab nahay safar gaaban ku tagnay magaalooyinka Arabsiyo ,Gabiley iyo ,Tog-wajaale. Dhulku waa degaan quruxdiisa iyo baaxadiisuba ballaadhan tahay,oo barwaaqo ah guud ahaan. Waxaan salaadii casar ku tukannay Masjid ku yaalla magaalada Gabiley,Ka dibna waxaanu lug ku soo marnay magaalada gudaheeda oo aan si daaba u kala fogeyn.Waxaanu fadhiisanay makhaa yad aan ka fogeyn halka ay ka baxaan gawaadhida u kal baxda magaaloyinka kale,oo aanu shaah ka qabsannay. Miiska nagu xiga, waxaa fadhiya niman dhalin yaro ah iyo niman odayaal waayeel ah.Waxaa dhagahayaga ku soo dhacaya,hadalo ay ka mid yihiin ,”Reer BUULLE,iyana isuma roona,Gobolkina faxeexad iyo ceeb bay u soo jiideen,” Muddo markii sheekadii ay sii wateen,ayaa nin markaa intii meesha fadhisay ugu da’ weynaa, qiyaastiian aan ku sifeyn karo illaa 79 sanno ku dhawaad ayaa yidhi,waar dhageysta: “Beeshan degaankan Gabiley degtaa,horena adeer umay talin jirin,dagaal meel ay weligeed ku gashaynna bal qabsoo lama sheegin,waqtigii 80 naadii ee xaaladda adag lagu jirayna, ee umadda la xasuuqayayayna,ayaa Siyaad Baree wefti ka socday, oo Muuse Rabiilana ka mid ahaa, ayaa yidhi maxaan idiin qabanna reer Gabilayaaw,ee aad maanta Dawlada ka codsan lahaydeen. Waxay ugu jawaabeen “Noo dallacsii Badhasaabkii BUULLE (MAREEXAAN )ee Gobolka ka talin jiray.Muddo yar ka dib,waa la dalac siiyey BUULLE , ka dibnna gabdh yar,oo reer Gabiley ah (Reer Dalal), oo 16 jir ah , oo reerkooda la wada yaqaan,ayay BUULLE,oo ahaa oday Aabaheed ka weyn, hilibkeedii u wadheen , una Arooseen,taana ceebtii ka raacday waatii la ogaa. Waxaad kale oo aad ogeydeen , Badhsaabkii xilka laga xayuubeyey ee Rashiid Sh.Cumar Sheekh Muxumed (Rashiid-Xaraaro), ceebta uu ka sameeyey Gobolka,ee umaddii dabka dhex dhigay, ee isnna halkaaka baxay. Badhasaabka habeenka madaw la soo magacaabayna,Cali Aw Adan Meecaad, waa kii dhgar qabe Maxamed Xaashi Gaani, u soo basaasi jiray,cidda SNM ah, cidda taageersan,ee loogu abaal guday inuu Hawlihii Maraakiibta ee Berbera loo dhiibo. Waqtigaa uu haystaynna,aanu cid kale aanu shaqo siin jirin,oo aan ahayn lafta hoose ee uu isagu ka soo jeedo mooyaane,oo aanu Dalalka kale,albaabka ka furi jirin. Waxaa kaloo jirta, in walaashii ,Safiya Aw Aadan Meecaad, oo ahayd islaantii durbaanka sidan jirtay ,ee Gabiley gudaheeda dadka dhibi jirtay,ee guryaha ku garaaci jirtay,ee soo baxaay,soo baxaay Hanuuntii baa la idinka rabaa,ee dumarka diidana odhan jirtay Siyaad Barre ayay diiday inay u heesto ,ee Askarta farta ugu fiiqi jirtay,iyadiina maanta madax gabiley looga dhigay. Intaas oo arrimood ayaa Gabiley ka jira,waan ta maanta Gobolkii hore u mari laayahay. Nin dhallin yaro ah,ayaa yidhi Awow maxaa markaa Gobolka u dan ah ee la yeeli karaa. Odaygii wayeelka ahaa wuxuu ugu jawaabay,waa in dadka Gobolka degani talo isugu yimaaddo ,oo is wareystaan. Mid kale ayaa yidhi, maadaama adigu aad tahay Nin weyn ,oo soo jireen ah,taariikh badanna soo maray, maxaa adigu ku talin lahayd.wuxuu odayggii ku jawaabay,anigu waxaan odhan lahaa: 1-Xarunta Maamulka ha loo raro Bustaanadii Arabsiyo dhexdooda iyo Hoygii Mujaahid Xasan Yoonis Habane 2-Maamulkana ha loo dhiibO Nimankii waligoodbba talin jiray , ee Colaad iyo Nabadbba lagu majiiran jiray , ee Reer Yoonis Jibriil (REER YOONIS GAALAAD). Markuu odaygii hadalkisii dhameystay,ayaa nin da’diisu tahay meel dhexaad ayaa yidhi, oo Adeer Beeshayada Reer Xareed , halkeed ku tiirisay ? Odaygii waayeelka haa intuu yara aamusay ayuu yidhi, “Idinka waxaa gacanta idinku haya Reer BUULLE (Reer Dalal), talo aanay idiin goynna kuma meel martaan, dhexdiinana jilibba gooni buu u shiraa,taasina waa la ogyahay, markaad keligiin meel martaan ayaa la sugi.” Odyagii waayeelkaa intuu bakooradiisii gacanta ku dhigay buu hadalkiisii ku soo dhammeyey,”Reer Buulle (Reer Dalal) ,iyana isuma roona,Gobolkii Gabileyna Ceeb iyo fadeexad bay u soo jiideen” Xasan Nuur
Xasuuqii Iyo Xuskii Sanad Guuradii Labaad Ee Dhacdadii 7/11
11kii Juulaay 2009 waxay aheyd maalintii murugada laheyd ee la dilay afarta muwaadin ee safarka ahaa, laguna laayey jidka weyn ee u dhaxeeya Hargeysa iyo Boorama. Dhacdadaasi oo la magac baxday 7/11 waxay ku qoran tahay xusuus qorka dhamaan wixii daneeya nabada una ololeeya xuquuqda aadamaha.
Ururweynaha ARDAA oo ah hey’ad samafal, lehna waax u dooda xuquuqda aadamaha, waxay maanta oo taariikhdu tahay 7/11/2011 xasuusanaysaa ooy xusaysaa sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay dilkii afartii muwaadin ee ku nafwaayey dhacdadii 7/11 oo kala ah:
1. Cali Maxamuud Nuur (Bagaashle)
2. Cali Aw Cumar Barre
3. Mowliid Xassan Cumar
4. Daa’uud Xaashi Jaamac
Ururku wuxu ka codsanayaa dhamaan bulshoweynta nabada jecel meel kasta ooy joogaanba iney nagala qaybgalaan xusuusta iyo xuskani sanad guuradii labaad ee dilkii ku caanbaxay 7/11, wuxuna ururku ku boorinayaa dhamaan mareegaha, iyo wargeysyada maxaliga iyo caalamiga ahba iney faafiyaan barnaamajyo loogu hiilinaayo cadaaladda iyo xaq u raadinta dadkii ku nafwaayey 7/11 ee kor ku xusan.
Waxaa nasiibdarro ah in labadaii dowladeed ee iskaga dambeeyey Soomaaliland aysan waxba ka qaban dhacdadaasi ooy dabnahooga iyo dhagahoogaba ka xidheen. Xaasaskii iyo caruurtii ka hadhay marxuumiinta ku nafwaayey jidgooyada, iyo bulshoweynta nabada jecel, waxay dhamaan ka dhowrayaan dowlada Soomaaliland ee iyadu masuulka ka ah sugida amaanka iyo fulinta cadaaladda iney u hiiliso sharciga dalka, sinaanta iyo wada jirka ooy xaqii iyo xuquuqdii muwaadiniintaasi u raadiyaan ooy maxkamad hor keenaan cidii ka dambeysay iyo kuwii fuliyeyba dhiigaasi xaqdarrada lagu daadiyey hadhka cad.
Waqtigani tiiraanyada badan ee la xasuusanaayo lana xusaayo sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay jidgooyadii lagu dilay haldoorka kor ku xusan, wuxu ururweynaha ARDAA tacsi u dirayaa qoysaskii, qaraabadii iyo eheladii marxuumiinta. Wuxuna Eebe uga baryayaan in marxuuminta ka waraabiyo janadii fardowsa, qoysaskoodii, qaraabadii iyo asxaabtiina samir iyo iimaan ka siiyo.
Ugu dambeyntii, wuxu ururku Eebe ka baryeynaa inuu marxuumintaasi gacanta ka gardarin dishay cadaaladooda soo dadajiyo oo gacan ku dhiiglayaashii falka foosha xun geysatay si dedeg ah sharciga loo horkeeno.
Ururka “ARDAA” e-mail: info@ardaa.org
11kii Juulay 2011
Ururka ARDAA waa urur dalad guud ah, kuna saleysan hanaanka bulshada, isla markaana samafal ah. Waxa Lagu asaasay Waqooyiga Mareykanka sanadkii 2007 si ay taageero ugu fidiyaan mashaariicda horumarineed ee dhaqan-daqaale ee gobalada ADAL iyaga oo mideynaaya muruq iyo maalba, una fidinaaya tababar, wacyigeliyaana, horena u mariyaan hogaankooda iyo iney u doodaan xuquuqdooda aadamaninimo.
Rayi”Reer Buulle (Reer Dalal) ,iyana isuma roona,Gobolkii Gabileyna Ceeb iyo fadeexad bay u soo jiideen
Waxaa aniga iyo nin aan asxaab nahay safar gaaban ku tagnay magaalooyinka Arabsiyo ,Gabiley iyo ,Tog-wajaale.
Dhulku waa degaan quruxdiisa iyo baaxadiisuba ballaadhan tahay,oo barwaaqo ah guud ahaan.
Waxaan salaadii casar ku tukannay Masjid ku yaalla magaalada Gabiley,Ka dibna waxaanu lug
ku soo marnay magaalada gudaheeda oo aan si daaba u kala fogeyn.Waxaanu fadhiisanay makhaa
yad aan ka fogeyn halka ay ka baxaan gawaadhida u kal baxda magaaloyinka kale,oo aanu
shaah ka qabsannay.
Miiska nagu xiga, waxaa fadhiya niman dhalin yaro ah iyo niman
odayaal waayeel ah.Waxaa dhagahayaga ku soo dhacaya,hadalo ay ka mid yihiin ,”Reer BUULLE,iyana isuma roona,Gobolkina faxeexad iyo ceeb bay u soo jiideen,”
Muddo markii sheekadii ay sii wateen,ayaa nin markaa intii meesha fadhisay ugu da’ weynaa,
qiyaastiian aan ku sifeyn karo illaa 79 sanno ku dhawaad ayaa yidhi,waar dhageysta:
“Beeshan degaankan Gabiley degtaa,horena adeer umay talin jirin,dagaal meel ay weligeed ku
gashaynna bal qabsoo lama sheegin,waqtigii 80 naadii ee xaaladda adag lagu jirayna,
ee umadda la xasuuqayayayna,ayaa Siyaad Baree wefti ka socday, oo Muuse Rabiilana ka mid ahaa, ayaa yidhi maxaan idiin qabanna reer Gabilayaaw,ee aad maanta
Dawlada ka codsan lahaydeen.
Waxay ugu jawaabeen “Noo dallacsii Badhasaabkii BUULLE (MAREEXAAN )ee Gobolka
ka talin jiray.Muddo yar ka dib,waa la dalac siiyey BUULLE , ka dibnna gabdh yar,oo reer Gabiley ah (Reer Dalal),
oo 16 jir ah , oo reerkooda la wada yaqaan,ayay BUULLE,oo ahaa oday Aabaheed ka weyn, hilibkeedii u wadheen ,
una Arooseen,taana ceebtii ka raacday waatii la ogaa.
Waxaad kale oo aad ogeydeen , Badhsaabkii xilka laga xayuubeyey ee Rashiid Sh.Cumar Sheekh Muxumed (Rashiid-Xaraaro),
ceebta uu ka sameeyey Gobolka,ee umaddii dabka dhex dhigay, ee isnna halkaaka baxay.
Badhasaabka habeenka madaw la soo magacaabayna,Cali Aw Adan Meecaad, waa kii dhgar qabe Maxamed Xaashi Gaani, u soo basaasi jiray,cidda SNM ah,
cidda taageersan,ee loogu abaal guday inuu Hawlihii Maraakiibta ee Berbera loo dhiibo.
Waqtigaa uu haystaynna,aanu cid kale aanu shaqo siin jirin,oo aan ahayn lafta hoose ee
uu isagu ka soo jeedo mooyaane,oo aanu Dalalka kale,albaabka ka furi jirin.
Waxaa kaloo jirta, in walaashii ,Safiya Aw Aadan Meecaad, oo ahayd islaantii durbaanka sidan jirtay
,ee Gabiley gudaheeda dadka dhibi jirtay,ee guryaha ku garaaci jirtay,ee soo baxaay,soo baxaay
Hanuuntii baa la idinka rabaa,ee dumarka diidana odhan jirtay Siyaad Barre ayay diiday inay u heesto
,ee Askarta farta ugu fiiqi jirtay,iyadiina maanta madax gabiley looga dhigay.
Intaas oo arrimood ayaa Gabiley ka jira,waan ta maanta Gobolkii hore u mari laayahay.
Nin dhallin yaro ah,ayaa yidhi Awow maxaa markaa Gobolka u dan ah ee la yeeli karaa.
Odaygii wayeelka ahaa wuxuu ugu jawaabay,waa in dadka Gobolka degani talo isugu yimaaddo
,oo is wareystaan.
Mid kale ayaa yidhi, maadaama adigu aad tahay Nin weyn ,oo soo jireen ah,taariikh badanna
soo maray, maxaa adigu ku talin lahayd.wuxuu odayggii ku jawaabay,anigu waxaan odhan lahaa:
1-Xarunta Maamulka ha loo raro Bustaanadii Arabsiyo dhexdooda iyo Hoygii Mujaahid Xasan Yoonis Habane
2-Maamulkana ha loo dhiibO Nimankii waligoodbba talin jiray , ee Colaad iyo Nabadbba
lagu majiiran jiray , ee Reer Yoonis Jibriil (REER YOONIS GAALAAD).
Markuu odaygii hadalkisii dhameystay,ayaa nin da’diisu tahay meel dhexaad ayaa yidhi,
oo Adeer Beeshayada Reer Xareed , halkeed ku tiirisay ?
Odaygii waayeelka haa intuu yara aamusay ayuu yidhi,
“Idinka waxaa gacanta idinku haya Reer BUULLE (Reer Dalal), talo aanay idiin
goynna kuma meel martaan, dhexdiinana jilibba gooni buu u shiraa,taasina waa la ogyahay,
markaad keligiin meel martaan ayaa la sugi.”
Odyagii waayeelkaa intuu bakooradiisii gacanta ku dhigay buu hadalkiisii ku soo
dhammeyey,”Reer Buulle (Reer Dalal) ,iyana isuma roona,Gobolkii Gabileyna Ceeb iyo
fadeexad bay u soo jiideen”
Xasan Nuur giriyaadnews
New Video:South Sudan becomes world’s newest country
Idaacad cusub oo Awdal State loo sameeyey
Seattle(giriyaadnews)- Dhamaanba dhegeystayaasha qaaliga ah waxa lala socodsiinayaa in la siidaayey Idaacad cusub oo magaceeda la yidhaa Radio Awdal State. Idaacada Codka Awdal State waxay hawada geeska Afrika soo gali doontaa Habeenkasta oo Axad ah saacadu markay tahay 8da Fiidnimo ilaa 8:40 Fiidnimo . Waxay hawada ku jiri doontaa mudo 40 daqiiqo ah. Mawjada 12120 Khz oo u dhiganta Mawjada gaaban ee dhererkeedu yahay 25 ka Meterband.
Idaacada waxaad ka dhegeysan kartaan dhamaan Gobolada Awdal State, K5aad, Jabuuti , Hadaba hamoogaan inaad la socotid barnaamijyo tayo leh oo ay idaacadu idiinla diyaar tahay. Dadweynaha Borama ku dhaqan waxa si gaar ah lala socodsiinayaa inay fikirkooda kasoo dhiibtaan siday umaqlaan habeenka Jimcaha ah oo ay tijaabo ahaan Idaacadu hawada Borama usoo gali doonto saacadaha aanu korku xusnay. Wixii fikir ah waxaad kusoo hagaajin kartaan saylacnews@yahoo.com Ama awdalstate@yahoo.com
Wasiirka Dib-u-dajinta Oo Kormeer Ku Tagay Madasha Caleemo Saarka Sul. Abiibakar Cilmi Wabar Ee Magaalada Qulujeed
July 11, 2011 — giriyaadnews
Q. 1aad Muxaadaroda Muslimiinta Iyo Maanta Oo Lagu Qabtay Masjidka Sh. Cali Jawhar Ee Boorama
Q. 2aad Muxaadaro Ku Saabsan Wanaag Farista iyo Xumaan Reebista Oo Lagu Qabtay Masjidka Sh. Cali Jawhar Ee Boorama
Hargysa,(giriyaadnews)- Taliyaha ciidankabooliska Maxamed Saqadhi Dubad iyo wasiirka arimaha gudaha Dr Maxamed Cabdi Gaboose ayaa gashaanka si gooni gooni ah ugu dhuftay in marxuun Xariir Cimsaan Cawaale oo ku magac dheeraa Dalab uu ahaa qaldaan ka horyimid ciidanka booliska iyo amarka ka soo fulay wasaarada arimaha gudaha. Marxuunka ayaa ay haleeshay rasaas ay ciidanka boolisku si badheedh ah ay u huwiyeen marxuunkaasi oo meel cararaaya, kadib markii dad shicib ah oo dhul ay leeyihiin difaacnaaya ay iska horyimaadeen ciidanka booliska oo amar ka soo qaatay wasaarada arimaha gudaha.
Waxaa aniga iyo nin aan asxaab nahay safar gaaban ku tagnay magaalooyinka Arabsiyo ,Gabiley iyo ,Tog-wajaale. Dhulku waa degaan quruxdiisa iyo baaxadiisuba ballaadhan tahay,oo barwaaqo ah guud ahaan. Waxaan salaadii casar ku tukannay Masjid ku yaalla magaalada Gabiley,Ka dibna waxaanu lug ku soo marnay magaalada gudaheeda oo aan si daaba u kala fogeyn.Waxaanu fadhiisanay makhaa yad aan ka fogeyn halka ay ka baxaan gawaadhida u kal baxda magaaloyinka kale,oo aanu shaah ka qabsannay. Miiska nagu xiga, waxaa fadhiya niman dhalin yaro ah iyo niman odayaal waayeel ah.Waxaa dhagahayaga ku soo dhacaya,hadalo ay ka mid yihiin ,”Reer BUULLE,iyana isuma roona,Gobolkina faxeexad iyo ceeb bay u soo jiideen,” Muddo markii sheekadii ay sii wateen,ayaa nin markaa intii meesha fadhisay ugu da’ weynaa, qiyaastiian aan ku sifeyn karo illaa 79 sanno ku dhawaad ayaa yidhi,waar dhageysta: “Beeshan degaankan Gabiley degtaa,horena adeer umay talin jirin,dagaal meel ay weligeed ku gashaynna bal qabsoo lama sheegin,waqtigii 80 naadii ee xaaladda adag lagu jirayna, ee umadda la xasuuqayayayna,ayaa Siyaad Baree wefti ka socday, oo Muuse Rabiilana ka mid ahaa, ayaa yidhi maxaan idiin qabanna reer Gabilayaaw,ee aad maanta Dawlada ka codsan lahaydeen. Waxay ugu jawaabeen “Noo dallacsii Badhasaabkii BUULLE (MAREEXAAN )ee Gobolka ka talin jiray.Muddo yar ka dib,waa la dalac siiyey BUULLE , ka dibnna gabdh yar,oo reer Gabiley ah (Reer Dalal), oo 16 jir ah , oo reerkooda la wada yaqaan,ayay BUULLE,oo ahaa oday Aabaheed ka weyn, hilibkeedii u wadheen , una Arooseen,taana ceebtii ka raacday waatii la ogaa. Waxaad kale oo aad ogeydeen , Badhsaabkii xilka laga xayuubeyey ee Rashiid Sh.Cumar Sheekh Muxumed (Rashiid-Xaraaro), ceebta uu ka sameeyey Gobolka,ee umaddii dabka dhex dhigay, ee isnna halkaaka baxay. Badhasaabka habeenka madaw la soo magacaabayna,Cali Aw Adan Meecaad, waa kii dhgar qabe Maxamed Xaashi Gaani, u soo basaasi jiray,cidda SNM ah, cidda taageersan,ee loogu abaal guday inuu Hawlihii Maraakiibta ee Berbera loo dhiibo. Waqtigaa uu haystaynna,aanu cid kale aanu shaqo siin jirin,oo aan ahayn lafta hoose ee uu isagu ka soo jeedo mooyaane,oo aanu Dalalka kale,albaabka ka furi jirin. Waxaa kaloo jirta, in walaashii ,Safiya Aw Aadan Meecaad, oo ahayd islaantii durbaanka sidan jirtay ,ee Gabiley gudaheeda dadka dhibi jirtay,ee guryaha ku garaaci jirtay,ee soo baxaay,soo baxaay Hanuuntii baa la idinka rabaa,ee dumarka diidana odhan jirtay Siyaad Barre ayay diiday inay u heesto ,ee Askarta farta ugu fiiqi jirtay,iyadiina maanta madax gabiley looga dhigay. Intaas oo arrimood ayaa Gabiley ka jira,waan ta maanta Gobolkii hore u mari laayahay. Nin dhallin yaro ah,ayaa yidhi Awow maxaa markaa Gobolka u dan ah ee la yeeli karaa. Odaygii wayeelka ahaa wuxuu ugu jawaabay,waa in dadka Gobolka degani talo isugu yimaaddo ,oo is wareystaan. Mid kale ayaa yidhi, maadaama adigu aad tahay Nin weyn ,oo soo jireen ah,taariikh badanna soo maray, maxaa adigu ku talin lahayd.wuxuu odayggii ku jawaabay,anigu waxaan odhan lahaa: 1-Xarunta Maamulka ha loo raro Bustaanadii Arabsiyo dhexdooda iyo Hoygii Mujaahid Xasan Yoonis Habane 2-Maamulkana ha loo dhiibO Nimankii waligoodbba talin jiray , ee Colaad iyo Nabadbba lagu majiiran jiray , ee Reer Yoonis Jibriil (REER YOONIS GAALAAD). Markuu odaygii hadalkisii dhameystay,ayaa nin da’diisu tahay meel dhexaad ayaa yidhi, oo Adeer Beeshayada Reer Xareed , halkeed ku tiirisay ? Odaygii waayeelka haa intuu yara aamusay ayuu yidhi, “Idinka waxaa gacanta idinku haya Reer BUULLE (Reer Dalal), talo aanay idiin goynna kuma meel martaan, dhexdiinana jilibba gooni buu u shiraa,taasina waa la ogyahay, markaad keligiin meel martaan ayaa la sugi.” Odyagii waayeelkaa intuu bakooradiisii gacanta ku dhigay buu hadalkiisii ku soo dhammeyey,”Reer Buulle (Reer Dalal) ,iyana isuma roona,Gobolkii Gabileyna Ceeb iyo fadeexad bay u soo jiideen” Xasan Nuur
Hargysa,(giriyaadnews)- Taliyaha ciidankabooliska Maxamed Saqadhi Dubad iyo wasiirka arimaha gudaha Dr Maxamed Cabdi Gaboose ayaa gashaanka si gooni gooni ah ugu dhuftay in marxuun Xariir Cimsaan Cawaale oo ku magac dheeraa Dalab uu ahaa qaldaan ka horyimid ciidanka booliska iyo amarka ka soo fulay wasaarada arimaha gudaha.
Marxuunka ayaa ay haleeshay rasaas ay ciidanka boolisku si badheedh ah ay u huwiyeen marxuunkaasi oo meel cararaaya, kadib markii dad shicib ah oo dhul ay leeyihiin difaacnaaya ay iska horyimaadeen ciidanka booliska oo amar ka soo qaatay wasaarada arimaha gudaha.
in Uncategorized. Leave a Comment »